मेरो ब्लड नै कांग्रेस हो : अभिनेत्री स्वेता खड्का – Sandes Post
May 5, 2022 428
काठमाडौ। अभिनेत्री श्वेता खड्का मंगलबार नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेकी छन् । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको छेकोमा पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले श्वेतासहित अभिनेता भुवन केसी र रविन्द्र खड्कालाई पार्टी प्रवेश गराए ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै अभिनेत्री खड्काले अबदेखि आफू सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने बताएकी छन् । समाजसेवा, फिल्म र व्यापारलाई सँगै अघि बढाउने जनाउँदै उनले कांग्रेसमार्फत महिलाका अधिकार उठाउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।
कलाकारलाई राजनीतिको ज्ञान हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनी स्वार्थ र पोजिसनको लागि राजनीतिमा नआएको दाबी गर्छिन् । पार्टी प्रवेशपछि अभिनेत्री खड्कासँग कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपाली कांग्रेस पार्टी नै किन रोज्नुभयो ?
राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि कस्ता काम गर्ने योजना छ ?
उद्देश्य धेरै छ । काम गर्न मन छ । राजनेता भएर होइन कि जनताको सच्चा सेवक भएर काम गर्नु मन छ । म सक्रिय राजनीतिमा लाग्छु र काम समर्पित भएर गर्छु । देशकै लागि काम गर्न सक्ने लिडरसिप आउनुपर्छ । मलाई धेरै ठाउँमा काम गर्नु मन छ । अझै पनि मानव बेचविखन कायमै छ । महिलाहरु धेरै पछाडि छन् ।
हरेक कुरामा केटाले गरे सही, केटीले गरे गलत भन्ने मान्यता छ । समानता भनेको छ, तर समानता कहाँ छ भन्नुस् न । सरकारले ३० प्रतिशत महिला सहभागिता भनेको छ । तर ५० प्रतिशत कहिले हुन्छ ? बोलेरै भन्दा पनि काम गरेर देखाउन मन छ । अवसर पाएँ भने प्रमाणित पनि गर्छु जस्तो लाग्छ मलाई ।
पार्टी प्रवेशको क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग तपाईंको यसबारे केही कुराकानी भयो ?
कतिपयले कलाकार भएर राजनीति गर्नुहुन्न भन्छन् । यसबारे तपाईंको टिप्पणी के छ ?
कलाकारलाई राजनीतिक हुनु कत्तिको जरुरी देख्नुहुन्छ ?शतप्रतिशत हुनुपर्छ । सम्पूर्ण नभए पनि आधारभूत ज्ञान हुनुपर्छ । आफ्नो पृष्ठभूमि थाहा हुनुपर्छ । लहैलहैमा भन्दा पनि बुझेर प्रवेश गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
राजनीतिमा तपाईं कुन नेतालाई आदर्श मान्नुहुन्छ ?अवश्य पनि, जुन नेताको हातबाट आज पार्टी प्रवेश गरें, म उहाँलाई नै आदर्श व्यक्ति मान्छु । म काभ्रेको गाउँले चेली भनेर पनि धेरैजनाले चिन्छन् । मोहन बस्नेत दाइको योगदान पनि त्यत्तिकै छ । धेरैजनाको म फ्यान छु । माथिबाट बोल्नु र प्राक्टिकल भएर कांग्रेसमा जति पनि नेता हुनुहुन्छ नि, उहाँप्रति मनदेखि समर्पण छ ।
आज एउटा पार्टी, भोलि अर्को पार्टी भन्ने होइन । आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग हुने, धैर्य भएर अरुको काम पनि हेर्ने हुनुपर्छ । स्वतन्त्र आवाजको लागि कुर्ने व्यक्तिहरु कांग्रेसमा हुनुहुन्छ के ।
नेपालको राजनीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? सेवा वा धन्दा उन्मुख ?
त्यस्तो कुरालाई त फिल्टर गर्नुपर्‍यो नि होइन ? यदि हामी जनता भएपछि राम्रो व्यक्तिलाई चुनेका हुन्छौं । यो व्यक्तिले धोका दिंदैन, राम्रो गर्छ भनेर । जनताले चुनेर पठाएका व्यक्ति गलत हुन्छन् र धन्दामुखी हुन्छन् भने चुप लागेर बस्नुहुन्न । जनताले पनि के कस्तो भनेर छुट्याउनुपर्छ । अहिले त प्रविधिको युग छ ।
जनता पनि स्मार्ट भइसके । के सही, के गलत भनेर अबको जनताले छुट्याउन सक्छन् । पहिले यस्तो धन्दा थियो होला । अब त देशको लागि सच्चा देश र जनताप्रति समर्पितलाई नै जिताउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहे जुनसुकै पार्टीको होस् ।
तपाईं कांग्रेसको कुन पोजिसनमा रहेर काम गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ?म स्वार्थको लागि र कुनै पोजिसन होल्ड गर्नको लागि आएकै होइन । जनताको लागि काम गर्न प्रवेश गरेकी हुँ । मेरो बिजनेस पनि निरन्तर हुन्छ । सामाजिक र फिल्मको काम पनि निरन्तर हुन्छ । राजनीतिमा आएर हामी हरेक क्षेत्रमा बोल्न र लड्न सक्छौं भने म राजनीतिलाई नै निरन्तरता दिन्छु।
अन्तिममा फिल्मका पनि कुरा गरौं, अब कुन प्रोजेक्टलाई अघि बढाउनुहुन्छ ?
हामीले बनाएका सबै फिल्म महिलाप्रधान नै हुन्छन् । महिलाकै कथा–व्यथामा आधारित फिल्महरु बन्छ । अबका फिल्म पनि महिलाप्रधान नै हुन्छ । मैले अब बनाउने फिल्ममा बलिया नारी पात्र हुन्छन् ।
किनभने हरेक क्षेत्रमा प्रमाणित पनि त भइसक्यो नि, महिलाले हरेक क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन् विश्वभर । कामले नै चिनाउने हो । अनुराधा कोइरालालाई म उदाहरणको रुपमा लिन्छु । उहाँ कामले सीएनएन हिरो बन्नुभएको हो । देशले उहाँलाई योगदान गरेको होइन । यस्ता व्यक्तिलाई देशले पनि सम्झनुपर्छ ।साभार: अनलाइनखबर
Prevनायिका पुजा शर्माको भब्य बर्थ डे पार्टी, प्रेमीले दिए यस्तो सर्प्राईज
Nextमेयर भिड्न कोरियाबाट ५७ दिनको छुट्टीमा, ‘जितें यतै बस्ने हारे फर्कने’